के सुशान्तको बैंकबाट रियाले निकालेकी थिइन् १५ करोड ?
बलिउड के सुशान्तको बैंकबाट रियाले निकालेकी थिइन् १५ करोड ?
Nepal Online Patrika: नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको बिषय अब नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ । मुम्बई प्रहरीले सुशान्तको निधनको बिषयमा बलिउडकर्मी तथा उनको आफन्तसँग सोधपुछ गरिरहेको छ । यसैविच, सुशान्तका पिताले पटना प्रहरीमा रिया चक्रवर्तीविरुद्ध एफआइआर दर्ता गरेपछि पटना प्रहरीले पनि यसको छानबिन गरिरहेको छ । पटनाबाट ४ प्रहरी अफिसर्स मुम्बई पुगेका छन् ।
सुशान्तका पिताले रिहाले सुशान्तको बैंक एकाउन्टबाट १५ करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । मुम्बई र बिहार प्रहरीपछि अब यो केसमा प्रवर्तन निर्देशालयले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । रियाले १५ करोड रुपैयाँ सुशान्तको बैंकबाट निकालेको बिषयमा निर्देशालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुशान्तका पिताले दर्ता गरेको एफआइआरमा सुशान्तको बैंक खाताबाट रियाले आफ्नी आमा, भाई र आफ्नो खातामा रकम ट्रान्सफर गरेको आरोप लगाइएको छ । नायिका रिया चक्रवर्तीले सुशान्तसँग आफू लिभिङ टूगेदरमा रहेको जानकारी भारतको सर्वोच्च अदालतलाई दिएकी छिन् ।
रियाले रकम ट्रान्सफर गरेको बैंक खाता उनी र उनका भाई प्रमुख रहेको कम्पनीको भएको मुम्बई प्रहरीले भारतीय मिडियालाई बताएको छ ।